Safaaradda Mareykanka Ee Wadanka Ciraaq oo weerar madaafiic ah lagu qaaday.
Tuesday September 24, 2019 - 11:29:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in weerar sawaariikh ah lagu qaaday dhismaha safaaradda Mareykanka ee kutaal magaalada Baqdaad.
Xalay saqdii dhexe ayaa dhowr madfac lagu weeraray mandiqadda khadka cagaaran ee magaalada Baqdaad halkaas oo ay kuyaallaan dhismaayaal dhowr ah sida safaaradda Mareykanka iyo dhismayaal kale oo taabacsan sirdoonka CIA-da.
Wakaaladda wararka AP ayaa sheegtay in sedax kamid ah sawaariikhda ay ku dhaceen gudaha xarunta safaaradda balse mid kamida ayaa u dhacay meel dhowr mitir ujira albaabka safaaradda ee gudaha Xayndaabka.
Sawaariikhda lagu weeraray mandiqadda aagga cagaaran oo nuucoodu ahaa Katiyoosha ayaan la ogeyn cidda mas'uulka ka aheyd balse waxaa loo badinayaa in weerarka ay geysteen garabyada Iiraan ee dalka Ciraaq kuwaas oo kasoo horjeedo cadaadiska Mareykanku ku hayo shiicada Iiraan.
Bishii May ee lasoo dhaafay ayay aheyd markii sidaan oo kale sawaariikh loogu weeraray dhismaha safaaradda Washington ee Baqdaad iyo saldhigyo kale oo Mareykanku uu ku leeyahay Ciraaq
si aad ugu darsato Channelka SomaliMeMo ee Telegramka halkan Guji ama @somalimemo1